Electro-Hydraulic Servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်ပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကတရုတ် - အရည်အသွေးမြင့်နောက်ဆုံးထွက်ဒီဇိုင်း - Parfit
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စာနယ်ဇင်းဘရိတ် > Electro-Hydraulic Servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
အောက်ပါ Electro-Hydraulic Servo စာနယ်ဇင်းBrakeâ€
လျှပ်စစ်-Hydraulic & servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်များ၏အင်္ဂါရပ်များ
စာနယ်ဇင်းဘရိတ် (နှစ်ဆပုဆိန်) အတွက် 1.ESTUN E200 အထူး CNC စနစ်ကမွေးစားထားသည်။
backgauge ၏ 2.The drive ကို elememt ထိုင်ဝမ်ဘောလုံးကိုဝက်အူများနှင့် linear guideway ချမှတ်။
option ကို CNC စနစ် 3. ESTUN E21, Delem DA41
ပန်းကန်သတ္တုများအတွက် WC67Y စီးရီးလျှပ်စစ် Hydraulic Servo NC တစ်ပြိုင်တည်းစာနယ်ဇင်းဘရိတ်နှင့်အတူစံအထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းသေ 6.A set ကို
7.The ဘောင်မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်အဖြစ်ကျစ်လျစ်နှင့်တိကျသော results.It အရည်အသွေးမြင့်ပျော့သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်စနစ်တကျစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များခံထားပြီးအာမခံထား။
မြင့်မားသောတိကျ 8 လျှပ်စစ်ဂဟေ
အစွန်းရောက်တိကျစိတျအပိုငျးအဘို့အမြင့်မားတဲ့နည်းပညာပျင်းစရာစက်၏9အသုံးပြုမှု
စံ configuration များ
Discription: ဒီ Controller ကိုနယ်သာလန်အတွက် Delem ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် controller ကိုစနစ်ဖြစ်သည်။ (DA52S များအတွက် မှလွဲ. , ဖောက်သည်နေဆဲ DA66T etcï¼‰, DA58T နဲ့တူအဆင့်မြင့် controller ကိုတခြားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
Discription: အဆိုပါစံမှို 90-180 ဒီဂရီကနေထောင့်ကွေးအသုံးပြုသည် (ဖောက်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ပုံဆွဲအညီမှိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ) ။
အဆိုပါ backgauge နှစ်ခုဝင်ရိုးတစျဦးက X သည်နှင့်အခြား Z ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ရှိပါတယ်။ X ကိုဝင်ရိုး (ညာသို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်ကိုညာဘက် left) ပစ္စည်းလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ Z ကိုဝင်ရိုးလည်းပစ္စည်းမှိုထဲသို့သွင်းထားသည့်အခါပစ္စည်းကိုင်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုသောရပ်တန့်လက်ချောင်းဟုခေါ်သည်
hot Tags:: စတော့ရှယ်ယာ, အစုလိုက်, အခမဲ့နမူနာစျေးနှုန်း, စျေးစာရင်းထဲတွင် Electro-Hydraulic တရုတ်လုပ် Servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကားစိတျွကိုဝယ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေးနိမ့်စျေးနှုန်းလျှော့စျေးဝယ်အရည်အသွေးမြင့်မား, , quotation အ, အမှတ်တံဆိပ်, နောက်ဆုံးပေါ်, classy, ​​အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း
CNC Electro-Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်စက်
Torsional ဝင်ရိုးတန်းက Synchronous Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်